Cortana ao amin'ny Windows 10 dia mpanampy amin'ny aterineto lehibe saingy, toy ireo mpanampy hafa, dia mitazona ny momba anao izy. Ity misy fomba haka ny dika mitovy mba hahafahanao mamerina azy io. Raha toa ny tolotra teknika sy ny mpampiasa nomerika dia mahatonga ny fiainantsika ho mora kokoa, ny orinasa izay manome ny serivisy ...
Ahoana ny fampandrenesana sy fampahatsiahivana amin'ny alalan'ny fampiasana Cortana
Ny fametrahana anao amin'ny traikefa tsy miovaova sy tsy misy fiafarana na aiza na aiza dia ny lafiny manan-danja amin'ny rafitra Windows 10. Ary ny famintinana ny fampandrenesana amin'ny fitaovana dia ampahany kely amin'izany. Eritrereto ny fametrahana izay ahafantaranao ny hafatrao sy ny antso tsy fantatrao ...
Cortana vs. Siri: Microsoft Revamps AI Mpanampy amin'ny fanandramana ny mpanohana an'i iOS Apple
Nofaritan'i Microsoft tamin'ny farany ny fampanantenany ny Cortana ho an'ny iOS amin'ity Zoma ity. Ny mpitondran'ny Redmond dia nitazona ny teniny fa hamoaka fanavaozana ny fampiharana azy izany, izay hanatsara ny fomba ampiasain'ny AI mpanampy azy. Ny fanatanterahana hafa tafiditra ao amin'ny ...
Ny Cortana ho an'ny iPhone dia haingana kokoa ary efa navaozina vao haingana
Microsoft dia nanavao ny Cortana ho an'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanavaozana manan-danja izay nomena ireo mpampiasa Android hatramin'ny volana Desambra. Araka ny notaterin'i Paul Thurrott, ny version 2.0 amin'ny app dia mamaly bebe kokoa amin'ny antso an-tariby, ny SMS, ary ny fampahatsiahivana ary ny valiny feno valiny feno pejy miaraka amin'ny pejy haingana.
Ny fampahatsiahivana vaovao vaovao nataon'i Cortana dia hampahatsiahy anao ny zavatra tsy tsaroanao
Cortana dia nanatsara ny zava-drehetra tamin'ny famoahana, ary nanampy ny Microsoft ny mpanampy amin'ny aterineto ho toy ny iray amin'ireo fanatitra tena izy. Cortana izao dia eo amin'ny sehatra malaza ary tsy voafetra amin'ny tontolo ecosystem Windows. Cortana dia fitaovana ampiasaina ...
Cortana dia afaka mampahatsiahy anao ny fampanantenana natao tao amin'ny mailakao
Manohy manatsara sy manampy ireo endri-javatra ho an'ny Windows 10 i Microsoft ho an'ny mpampiasa maintream sy Insider 'build version'. Ao amin'ny bilaogin'ny Windows Experience Microsoft dia vao haingana no nanambara ny fahaiza-mana-tsaina vaovao ho an'i Cortana, ilay mpanampy dizitaly. Mandritra izany, ny Windows Insiders dia tsy maintsy milalao amin'ny Build 15031 izay ...
Microsoft Pushing Cortana hiasa amin'ny kitron-tsakafo, thermostats ary ny zavatra hafa rehetra
Raha mikarakara ny famoahana ny Windows 10 IoT Core amin'ny fitaovana marobe marobe i Microsoft, dia manosika mangingina ny fisian'ny Cortana amin'ny fitaovana rehetra izay hanohanan'ny Windows 10 vahaolana hafa. Mifototra amin'ny ...
Cortana ho an'ny Android dia hampahatsiahy anao momba ny andro nahaterahan'ny namanao
Herinandro vitsivitsy aorian'ny fanavaozana farany, dia manangona hafa indray i Cortana amin'ny Android: raha avelanao miditra ao amin'ny Outlook Kalandrieranao, ny mpampiofana manokana dia hampahatsiahy anao ireo andro nahaterahan'ny namanao. Ity endri-javatra ity dia ampahany amin'ny vaovao vaovao 1.9.12 izay ...
Cortana ho an'ny Android dia mahazo fampahatsiahivana tsara kokoa ho an'ny fampahatsiahivana, haingana kokoa ny pejy miaina ao anaty vaovao vaovao 1.9.10
Ireo mpisera dimy tapitrisa Cortana amin'ny Android dia afaka mamoaka ny fanavaozana farany ho an'ny mpanampy mikendry ny Microsoft. Ny famandrihana vaovao vaovao 1.9.10 dia mety tsy ho avy amin'ny dindon'ny fidirana lalina tahaka ny app ho an'ny Windows Phone, fa manampy amin'ny ...
Ahoana ny fialan'i Cortana amin'ny Windows 10 Anniversary Edition
Niditra tao amin'ny Windows 10 ny Cortana mpanampy niomerika, ary naharay vaovao maromaro tamin'ny fanontana Anniversary. Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no te hiresaka amin'ny solosainy, ary aleony ny manala izany fotsiny. Toy izao. Fanamarihana: Manampy mandrakariva i Microsoft vaovao ho an'i Cortana sy ...
Ataovy ny Cortana Fijerena YouTube Music Video Lyrics ao amin'ny Edge
Ny andiany farany amin'ny Windows 10 (Anniversary Edition) dia manana karazany vaovao miaraka amin'i Cortana. Ny iray amin'izany dia ny fahafahana mampiseho mozika mozika ao amin'ny YouTube ao amin'ny Microsoft Edge. Ity ny fomba hananganana. Manaova sarimihetsika Cortana mijery ao amin'ny YouTube Manandrama YouTube ary tadiavo ny lahatsary azonao.
Ahoana ny fomba hanakanana ireo loharanom-baovao tsy fantatra ao amin'ny Windows 10
RECOMMENDED: Tsindrio eto raha hamaha ny fahadisoana Windows sy manatsara ny fampisehoana ny rafitra The Cortana mpampiasa nomerao ho an'ny haino aman-jery dia mampahatsiahy anao ny hampahatsiahivana ny fisehoan-javatra efa voafaritra ao amin'ny kalandrie, manao soso-kevitra amin'ny fikarohana ao amin'ny tranokala sy bebe kokoa. Na izany aza, raha hitanao fa manelingelina kokoa io Cortana io ...
Ahoana ny fampiasana Cortana ho Diksionera amin'ny Windows 10
RECOMMENDED: Tsindrio eto raha hamaha ny fahadisoana Windows sy manatsara ny fahombiazan'ny orinasa Cortana ao amin'ny Windows 10 dia tsy voafetra ho an'ny fikarohana. Azo ampiasaina amin'ny asa hafa ilaina izy io. Ohatra, rehefa mitady ny dikan'ny teny iray ianao, inona no ataonao?
Cortana tonga ao amin'ny Xbox Live
Teny fohy nivoaka avy amin'ny E3: na dia nandehandeha roa andro lasa aza, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Cortana, ilay mpanolotra fandaharana amin'ny teny Windows (toa an'i Siri sy Google Now) dia tonga ao amin'ny Xbox Live sy ny sehatra Console Xbox. Voampanga io fanambarana io ...
Ahoana ny fampiasana an'i Cortana sy Lenovo amin'ny ReachIt mba hahitanao ny rakitra manaparitaka amin'ny fiainanao dizitaly
Vao haingana i Lenovo no namoaka programa Desktop / App Store Windows izay manampy ny fahefana bebe kokoa ho an'i Cortana ao amin'ny Windows 10 PCs. Ny Reachit an'i Lenovo dia ahafahanao mandray an'i Cortana ho toerana tsy mbola nisy teo aloha tamin'ny fampifandraisana ny mpampiasa nomerika ho an'ny antontan-taratasinao ao anatin'ny tiana.
Ny Microsoft dia mitondra ny fampandrenesana Android ho an'ny Windows 10
Ny fampandrenesana avy amin'ny findainao Android dia hipoitra tsy ho ela ao amin'ny PC Windows 10, noho ny zava-baovao iray, nanambara tao amin'ny Build 2016, izay mikasa ny hitondra any amin'ireo sehatra roa amin'ny hoavy tsy ho ela. Ny fampandrenesana ny fisehoan-javatra ao amin'ny foibe fampandrenesana Windows 10 dia ho ...
Ny Windows Store apps dia tsy manomboka amin'ny Windows 10 manana kaonty mpampiasa marobe
RECOMMENDED: Tsindrio eto raha hamaha ny fahadisoana Windows sy manatsara ny fahombiazan'ny orinasa sasany Ny mpampiasa Windows 10, indrindra ireo izay mety nividy fitaovana vaovao dia nitatitra fa ny app Windows Windows dia tsy manomboka na mivoha. Ity nomerao ity dia notsongaina manokana tamin'ireny Windows 10 ireny.
Ampiasao ny Cortana mba hanombohana, alohan'ny famoahana na famerenana ny solosaina Windows 10
RECOMMENDED: Tsindrio eto raha hamaha ny fahadisoana Windows sy manatsara ny fahombiazan'ny orinasa Rehefa nikarakara voalohany tao amin'ny Windows 10 PC ny Cortana, dia niteraka hafanam-po teo amin'ireo mpomba ny Windows. Nolazaina fa mihoatra noho ny fikarohana tsotra tsotra. Ny mpanampy feo feo nomerika dia nanampy ny fanaovana ny zavatra tsotsotra kokoa. Na izany aza, ...
Windows 10 Redstone Build 14295 ho an'ny finday sy PC navoaka tamin'ny Insiders
Nafahan'i Microsoft androany Windows 10 Redstone Build 14295 ho an'ny Windows Insiders amin'ny paositra Fast amin'ny PC sy Mobile. Ity dia tonga amin'ny alàlan'ny Redstone Build 14291 tamin'ny herinandro farany izay ahitana ny fanampim-pitantanana fanampiny amin'ny Microsoft Edge sy ireo endri-baovao hafa. Izany fanorenana izany ...
Ahoana ny fomba hanaovana Cortana Show Weather ho an'ny tanàna maromaro amin'ny Windows 10
Cortana no mpanampy manokana ny Windows 10 ary izy io dia iray amin'ireo endrika vaovao tsara indrindra amin'ny rafitra fiasa vaovao indrindra an'ny Microsoft. Manohana ny natiora io mpanentana virtualista io ...
finday avo lenta fanamarinana Plugins Command HTTP CentOS 7 One ' Company 'App windows update haino aman-jery sosialy Nginx Support Linux Mint File Phone taona Time endri-javatra fifamoivoizana Users PHP Apache Unité centrale MySQL Up " Plugin Windows 8 loharano misokatra Toetoetra Ubuntu 14.10 Windows 10 fikarohana paoma PDG WordPress famotsorana Google Rafitra fikirakirana takelaka fikirakirana Cortana Facebook fitaovana Debian YouTube bilaogy Firefox Samsung SSH HTTPS raki-daza 10 toe-tsaina iPhone Apple Watch rindrambaiko Windows Android Linux IP adiresy Ubuntu 16 Database famerenana Linux Ubuntu Systems SEO Ubuntu app store Ubuntu 14.04 Ubuntu (rafitra fandidiana) Server HTML fitaovana finday web server Microsoft lalao Fitaovana finday Unix fitaovana API Screen nbsp USB Windows Phone "PC 04 rafitra fitaovana PPA GNOME OS X hametraka web browser lalao Apps bilaogy Video ubuntu 15.04 Microsoft Windows ram CentOS SSD command line Bing afa-po Twitter Malagasy Bible Samsung Galaxy vaovao farany MAMAKA tahirin-kevitra Chrome